warkii.com » Ranveer Singh oo shaqadiisa dib u bilaabaya lix bilood kadib, Muxuu soowadaa Singh?
Ranveer Singh oo shaqadiisa dib u bilaabaya lix bilood kadib, Muxuu soowadaa Singh?
Shirkadaha filamada sameeya iyo kuwa Tvyada ee musasalada ayaa shaqooyin dib u amba qaaday kadib xanibaadi convid19;
aktarada ayaa banaanka usoo baxay si ay ugu soo laabtaan jadwalka shaqada ku dhowaad lix bilood kadib. Dadka caanka ah ee shaqada kusoo laabtay waxaa kamid ah Akshay Kumar, Kareena Kapoor Khan, Rani Mukerji, Saif Ali Khan, Vaani Kapoor iyo kuwa kale. Ranveer Singh, usbuucii la soo dhaafay, ayuu usoo baxay isagoo xayeysiin kusameenayay magaalada Mumbai.
duubista waxaa lagu qabtay muddo seddex maalmood ah Ranveer Singh wuxuu dib u bilaabay shaqadiisii ​​lix bilood kadib, wuxuu u baxay si uu u xayeysiin.uduubo, koox ka kooban 20 xubnood ayaa loo xushay si ay ugu hoggaansamaan tilmaamaha amniga. Iyaga ayaa la tijaabiyey kahor duubista xayeesiinta, goobta ayaa la nadiifiyay kahor iyo kadib toogashada.
Agaasimuhu wax walba wuu qorsheeyay sidaa darteed shaqaaluhu way ogaayeen waxa saxda ah ee la sameynayo mar alla markii uu bilaawdo duubista. Xayeysiinta uu Ranveer duubay sedexdaan maalmood ayaa la rajeynayaa inuu Dussehra ka hor hawada soo galo. Dhanka shaqada, Ranveer Singh ayaa soowada filmka 83 halkaasoo uu kumatalayo doorka Kapil Dev daawashadiisa filmkaan dib ayaa loodhigay.
kooxda filmka sameesay waxay rajeynayaan inay ku sii daayaan shaashadda weyn laakiin kama reebayaan xulashooyinka dhijitaalka ah sidoo kale. Dhanka kale, Aktarka ayaa kujira labo mashruuc Jayeshbhai Jordaar iyo Zoya Akhtar’s gangster drama. Takht.